Shiinaha Industry News Factory - Cheap Industry News-qeybiye, dhoofisaa - Part 2
The dab US Hoverboard sababay dhimashada hal iyo laba dhaawac
waqti Post: 03-15-2017
Sida laga soo xigtay warbaahinta dalka Maraykanka ayaa sheegay in March 11, 2017, magaalada Harrisburg dhacdo qarax dab hoverboard keentay in dhimashada ilmaha, laba gabdhood ay ku dhaawacmeen, marka lagu daro damiska ah ay ku dhaawacmeen. Sida laga soo xigtay damiska tilmaamay, at 8 pm, si ay u baxsadaan, mid ka mid ah dhibanayaasha ka ...Read more »
Electric Hoverboard dhigaysa nolosha dheeraad ah oo caadi ah & free
waqti Post: 03-07-2017
Maalmahan, sports waxa uu noqday hawlaha jecel in gens xafiiska, shaqaalaha cad-collar xafiiska, maalinta computer ka, qaybo kasta oo jidhka ah waa jimicsi la'aan, gaar ahaan u nugul dhibaatooyinka kala duwan ee yaryar ee dhinacyada kala duwan ee jirka, sida qoorta xanuun, mouse gacanta, indhaha qalalan, dheeraad ...Read more »
Xidhiidhka ka dhexeeya UL 2272 Certification & Hoverboard
waqti Post: 02-07-2017
Hoverboard sidoo kale loo yaqaan mootooyinka is-dheelli, ay sabab u tahay dhacdo dab hoverboard sanadihii hore ', Consumer Product Safety Association Mareykanka (CPSC) ayaa ku dhawaaqday in dhammaan mooto is-dheelli ama Hoverboard saarayaasha, waarido iyo distributors baabuurta counterbalanced waa inay u hoggaansamaan ah .. .Read more »
The Faa'iidooyinka fuushan hoverboard a
waqti Post: 12-26-2016
Hoverboards aad ayaa loo jecel maanta iyo waxa ay noqotay isbedel ah ee carruurta, dhallinyarada iyo aults in ay safar gaaban la dheelitirka is cabsado hoverboard.If aad rabto in aad ka iibsan gacmaha hoverboard lacag la'aan ah caruurta, asxaabta ama naftaada, waxaad ka heli kartaa Xog badan ka internet ku saabsan wheel 2 ...Read more »
Maxaad mooto korontada ama skeidgareeyo si dhaweeyay suuqa?
waqti Post: 12-14-2016
Ku qor sanadka cusub, dheelitirka tartanka beerta mooto korontada sii kulul. saarayaasha Major ayaa bilaabay waxyaabaha cusub ay, sii xoojiyaan iyo ballaariyo saameynta iyo xaaladda ay ku sugan macaamilka. Qoraaga ayaa had iyo jeer loo arkaa in mid ka mid ah co ugu muhiimsan ...Read more »
Waa maxay sababta mooto dheelitirka noqon artifact shaqada cad-collar ee?
waqti Post: 11-22-2016
Marka aad tagto shaqada, maxaad ka cabsada inta badan? Waxaan aaminsanahay in dadka intooda badan ku odhan doonaa in ay soo daahdo, haddii ay saameeyeen daaweynta ka baxsan si ay u shaqeeyaan. Dadka intooda badan in ay ka shaqeeyaan by kortaan hoostiisa baska, dabcan, dooran kartaa in aad iska socdaan. Oo dhaxeeya seddex ka mid ah ay disadv u gaar ah ...Read more »
Ma ogi, kuwaas oo talooyin waxtar u dheelli mooto u ilaaliyaan aad?
waqti Post: 11-03-2016
Imisa ayaad ku ogaan waayo dheelli mooto ilaaliyaan talooyin? Maanta ha Koowheel Editor bandhigo kuu. Habka masruufka Dheelitirka mooto ama hoverboard: 1. Isticmaalka Koowheel dheelli mooto aan la kala saari karaan doorka giraangirta, sidaas darteed waa in aan ka dhigi inspecti habboon ...Read more »